Fanoharana Momba Ilay Mpanankarena sy Lazarosy | Fiainan’i Jesosy
Ny Fiovana teo Amin’ilay Mpanankarena sy Lazarosy
FANOHARANA MOMBA AN’ILAY MPANANKARENA SY LAZAROSY
Avy nanoro hevitra ny mpianany momba ny fampiasana ny harena i Jesosy. Teo koa ny Fariseo ary tokony ho nandray am-po an’ilay torohevitra izy ireo, satria “tia vola.” “Naneso an’i Jesosy” anefa izy ireo rehefa nandre ny teniny.—Lioka 15:2; 16:13, 14.
Tsy natahotra azy ireo i Jesosy fa nilaza hoe: “Ianareo milaza tena ho marina eo anatrehan’ny olona, nefa fantatr’Andriamanitra ny fonareo. Fa izay ataon’ny olona ho ambony dia maharikoriko kosa eo imason’Andriamanitra.”—Lioka 16:15.
Efa ela ny Fariseo no ‘nataon’ny olona ho ambony.’ Hivadika anefa ny rasa. Haetry ireo nohindrahindraina, izany hoe ireo nanan-karena sy nanana fahefana teo amin’ny politika sy fivavahana. Hasandratra kosa ny sarambabem-bahoaka, izay manaiky hoe mila an’Andriamanitra. Nasehon’i Jesosy mazava tsara fa nisy fiovana lehibe nitranga. Hoy izy:
“Hatreo amin’i Jaona ihany ny Lalàna sy ny Mpaminany. Fa nanomboka teo kosa dia ny fanjakan’Andriamanitra no vaovao tsara torina amin’ny olona, ary misesika ho ao ny karazan’olona rehetra. Fa ho mora kokoa ny hahalevona ny lanitra sy ny tany noho ny tsy hahatanteraka ny tendron-tsoratra iray ao amin’ny Lalàna.” (Lioka 3:18; 16:16, 17) Nahoana ireo teny ireo no mampiseho fa hisy fiovana?
Nirehareha ny mpitondra fivavahana jiosy hoe nanaraka ny Lalàn’i Mosesy. Hoy ny Fariseo rehefa nanasitrana an’ilay jamba tany Jerosalema i Jesosy: “Izahay mpianatr’i Mosesy. Fantatray fa niteny tamin’i Mosesy Andriamanitra.” (Jaona 9:13, 28, 29) Ny hitarika an’ireo manetry tena mba hino ny Mesia na Jesosy no antony iray nanomezana ny Lalàna. Nantsoin’i Jaona Mpanao Batisa hoe Zanak’ondrin’Andriamanitra i Jesosy. (Jaona 1:29-34) Nandre momba “ny fanjakan’Andriamanitra” ny Jiosy nanetry tena, indrindra fa ny mahantra, nanomboka tamin’i Jaona nitory. Afaka mandre ny “vaovao tsara” tokoa izay te ho vahoakan’ilay Fanjakana sy te handray soa avy amin’izy io.
Nahavita ny asany ny Lalàn’i Mosesy, satria nitarika ny olona hino ny Mesia. Tsy voatery hitandrina azy io intsony ny olona. Namela ny olona hisara-panambadiana noho ny antony samihafa, ohatra, ny Lalàna. Hoy anefa i Jesosy: “Manitsakitsa-bady izay lehilahy misaraka amin’ny vadiny ka manambady olon-kafa. Ary izay manambady vehivavy nisarahan’ny vadiny dia manitsakitsa-bady.” (Lioka 16:18) Tena nampahatezitra an’ireo Fariseo tia namorona lalàna izany tenin’i Jesosy rehetra izany.
Nilaza fanoharana manasongadina ny haben’ilay fiovana i Jesosy. Miresaka lehilahy roa ilay izy, ary nitsimbadika ny fiainan’izy ireo. Handinika azy io isika, ka tadidio fa nihaino teo ireo Fariseo tia vola sy nohindrahindraina.
Hoy i Jesosy: “Nisy lehilahy manankarena nanao akanjo vita tamin’ny lamba volomparasy sy rongony. Niravoravo isan’andro izy sady niaina tao anatin’ny renty. Fa nisy kosa mpangataka atao hoe Lazarosy, napetraka teo am-bavahadiny. Feno fery izy io. Te ho vokin’ny sombin-kanina latsaka avy tamin’ny latabatr’ilay manankarena izy. Ary tonga ny alika nilelaka ny feriny.”—Lioka 16:19-21.
Tia vola ny Fariseo ka azo inoana fa izy ireo no tian’i Jesosy holazaina amin’ilay hoe “lehilahy manankarena.” Tia manao akanjo mirenty sy lafo vidy koa izy ireo. Nanan-karena izy ireo sady nanana tombontsoa sy voninahitra be. Ny toerana ambony nananany no tiana horesahina amin’ilay akanjo volomparasy fitafin’ny mpanjaka. (Daniela 5:7) Ilay rongony fotsy kosa midika hoe miseho ho marina izy ireo.
Ahoana no fiheveran’ireo nanambony tena sy nanan-karena ireo ny mahantra sy ny sarambabem-bahoaka? Nohambaniany izy ireny ary nantsoiny hoe ‛am ha’arets na olon’ny tany. Nolazainy fa tsy mahalala ny Lalàna izy ireny sady tsy mendrika ny hampianarina an’izany. (Jaona 7:49) Toa an’ireny olona ireny ilay “mpangataka atao hoe Lazarosy.” Tiany hohanina na dia ny “sombin-kanina latsaka avy tamin’ny latabatr’ilay manankarena” aza. Noheverina ho ambany toy ny hoe marary ara-panahy ny sarambabem-bahoaka, tsy misy hafa amin’i Lazarosy feno fery.
Efa ela no nisy an’izany toe-javatra mampalahelo izany. Fantatr’i Jesosy anefa fa hiova be ny fiainan’ireo olona mitovy amin’ilay mpanankarena sy ireo toa an’i Lazarosy.
Nilaza an’ilay fiovana lehibe i Jesosy avy eo. Hoy izy: “Tatỳ aoriana, dia maty ilay mpangataka, ary nentin’ny anjely ho any an-tratran’i Abrahama. Ary maty koa ilay manankarena ka nalevina. Rehefa tao amin’ny toeran’ny maty izy, dia niandrandra raha iny izy nijalijaly iny, ka nahita an’i Abrahama teny lavitra teny, sy Lazarosy teo an-tratrany.”—Lioka 16:22, 23.
Fantatr’ireo nihaino teo fa efa ela i Abrahama no maty ary ao am-pasana. Milaza mazava ny Soratra Masina fa tsy afaka mahita na miteny ireo ao amin’ny fasana na Sheôl, ary anisan’izany i Abrahama. (Mpitoriteny 9:5, 10) Ahoana àry no fahazoan’ireo mpitondra fivavahana tia vola ny tenin’i Jesosy? Inona no nety ho tian’i Jesosy holazaina momba azy ireo sy ny sarambabem-bahoaka?
Vao avy nilaza fiovana i Jesosy rehefa niteny fa ‘hatreo amin’i Jaona Mpanao Batisa ihany ny Lalàna sy ny Mpaminany, fa nanomboka teo kosa dia ny fanjakan’Andriamanitra no vaovao tsara torina amin’ny olona.’ Rehefa nitory i Jaona sy Jesosy Kristy, dia niova ny fiainan’i Lazarosy sy ilay mpanankarena, ka toy ny hoe maty izy ireo. Nahazo toerana vaovao teo anatrehan’Andriamanitra izy ireo nanomboka teo.
Efa ela ireo manetry tena na mahantra no tsy ampy sakafo ara-panahy. Toy ny hoe tsy maintsy nianina tamin’ny ‘sombin-kanina latsaka avy tamin’ny latabatry’ ny mpitondra fivavahana izy ireo. Nanampy azy ireo anefa ny hafatra momba ilay Fanjakana notorin’i Jaona Mpanao Batisa sy Jesosy, ary noraisiny tsara. Nampianarina azy ireo ny fahamarinana lehibe ao amin’ny Soratra Masina, indrindra fa ny fampianaran’i Jesosy. Toy ny hoe izy ireo indray no nisandratra teo imason’i Jehovah Andriamanitra.
Ireo mpitondra fivavahana nanan-karena sy nanana fahefana kosa nanda ny hafatra momba ilay Fanjakana, izay notorin’i Jaona sy notorin’i Jesosy eran’ilay firenena. (Matio 3:1, 2; 4:17) Nahatezitra na nampijaly azy ireo io hafatra io, satria niresaka momba ny didim-pitsaran’Andriamanitra ho avy, izay toy ny afo. (Matio 3:7-12) Ho maivamaivana ireo mpitondra fivavahana tia vola ireo, raha tsy nitory ny hafatr’Andriamanitra intsony i Jesosy sy ny mpianany. Toa an’ilay mpanankarena ao amin’ilay fanoharana izy ireo. Hoy izy io: “Abrahama Raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho i Lazarosy hanatsoboka ny tendron’ny rantsantanany ao anaty rano mba hampangatsiatsiaka ny lelako, fa mijaly aho ato amin’ity afo mivaivay ity.”—Lioka 16:24.
Tsy nitranga anefa izany. Tsy niova ny ankamaroan’ny mpitondra fivavahana. Tokony ho nanampy azy ireo hanaiky an’i Jesosy ho Mesia sy Mpanjaka ny zavatra nosoratan’i Mosesy sy ny Mpaminany, nefa nanda tsy hihaino an’izany izy ireo. (Lioka 16:29, 31; Galatianina 3:24) Tsy nanetry tena koa izy ireo ary tsy nanaiky hotaomin’ireo mahantra, izay lasa nankasitrahan’Andriamanitra satria nanaiky an’i Jesosy. Ny mpianatr’i Jesosy kosa nitory foana ny fahamarinana sady tsy nampihen-danja azy io. Tsy te hampifaly ny mpitondra fivavahana izy ireo na hanamaivamaivana azy. Nasehon’i Jesosy tao amin’ilay fanoharana izany, araka ireto tenin’i “Abrahama” tamin’ilay mpanankarena ireto:
“Tadidio, anaka, fa efa azonao daholo ny zava-tsoanao rehetra nandritra ny androm-piainanao, fa ny an’i Lazarosy kosa ny zava-dratsy. Izao izy ampiononina atỳ, fa ianao kosa mijaly. Sady misy hantsana lehibe efa napetraka koa anie hampisaraka anay aminareo e, mba tsy ho afaka hankany aminareo ny te hiala atỳ, ary tsy ho afaka hiampita mankatỳ aminay ny any.”—Lioka 16:25, 26.
Rariny raha nitranga io fiovana lehibe io. Asehon’izy io fa nitsimbadika ny fiainan’ireo mpitondra fivavahana nieboebo sy ny an’ireo nanetry tena ka nanaiky ny ziogan’i Jesosy. Lasa velombelona sy nahazo sakafo ara-panahy ireo nanetry tena. (Matio 11:28-30) Vao mainka nisongadina io fiovana io volana vitsivitsy tatỳ aoriana, rehefa nosoloana fifanekena vaovao ny fifaneken’ny Lalàna. (Jeremia 31:31-33; Kolosianina 2:14; Hebreo 8:7-13) Nandatsaka ny fanahy masina tamin’ny mpianatr’i Jesosy Andriamanitra tamin’ny Pentekosta taona 33. Niharihary tamin’izay fa izy ireo no nankasitrahany fa tsy ny Fariseo sy ny namany.
Inona no tsy nampitovy ny fiainan’ny mpitondra fivavahana jiosy sy ny sarambabem-bahoaka?
Inona no nolazain’i Jesosy fa fiovana nitranga nanomboka tamin’i Jaona nitory?
Iza no oharina amin’ilay mpanankarena ao amin’ilay fanoharana, ary iza no toa an’i Lazarosy?
Inona no nolazain’i Jesosy ka nampiseho fa nisy fiovana nitranga?
Ahoana no nandraisan’ny mpitondra fivavahana ny hafatra notorin’i Jaona sy Jesosy? Inona tao amin’ilay fanoharana no mampiseho an’izany?
Inona no tian’ireo mpitondra fivavahana hitranga, nefa nahoana no tsy nitranga izany?
Oviana no tena nisongadina ilay hantsana nanasaraka ny mpitondra fivavahana sy ny mpianatr’i Jesosy?
Hizara Hizara Ny Fiovana teo Amin’ilay Mpanankarena sy Lazarosy